जन्मजात जण्डिसबाट पीडित नेता पुन उपचारका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान – Health Post Nepal
जन्मजात जण्डिसबाट पीडित नेता पुन उपचारका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान
२०७८ असोज १३ गते १२:०१
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन उपचारका लागि थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेका छन्। उनी आज बिहान हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजबाट थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेक हुन्। उनीसँगै श्रीमती एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती पनि थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेकी छन्।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्जसमेत रहेको नेता पुन वंशाणुगत जण्डिसबाट पीडित छन्। चिकित्सकको सुझावअनुसार नेता पुन बैंकक प्रस्थान गरेका हुन्। जन्डिसका कारण राजधानीको सुमेरु सिटी अस्पतालमा दुई दिनदेखि उनी उपचाररत थिए।
लामो समयदेखि पुनको स्वास्थ्य हेरिरहेका पेटरोग विशेषज्ञ डा. युवराज शर्माका अनुसार उनलाई जन्मजात जण्डिस भएको छ। डा. शर्माले नै तीन वर्षअघि पुनको रोग पहिचान गरेका थिए। तीन वर्षअघि जण्डिसको लेबल उच्च भएका कारण इन्फेक्सन भई शरीरका विभिन्न अंगमा असर देखिएपछि उनी थप उपचारका लागि बैंकक गएका थिए। त्यसबेला डा. शर्मा पनि साथमा गएका थिए।
माओवादी नेता पुनको उपचार नेपालमा असम्भव, यसो भन्छन् उपचारमा संलग्न चिकित्सक